Iindaba - Iindidi kunye neempawu zeminatha yokubiya
Iindidi kunye neempawu zeminatha yokubiya
Zininzi iintlobo zocingo kunye nezinto ezahlukeneyo zokwenza izinto. Loluphi uhlobo locingo olulungele wena? Ke ngoko, kufuneka siziqonde iindidi kunye neempawu zeminatha yocingo esetyenziswa ngokuxhaphakileyo, ukuze sikwazi ukukhetha esiza kuyisebenzisa. Emva koko, udade womgcini uya kuthetha ngeentlobo kunye neempawu zezi zikhuseli.
Iminatha yothango ohola wendlela, iminatha yocingo kaloliwe, iminatha yocingo yokuzalela, iminatha yocingo ebiyelweyo, iminatha yocingo yokugcina ucweyo, iminatha yocingo lwezemidlalo.
Iindidi eziqhelekileyo kunye neempawu zeminatha yocingo yendlela
Ucingo lwamacala amabini: Ihlala isetyenziselwa ukuvala okanye ukuvala ngakwicala elivaliweyo kumacala omabini endlela ukunqanda ukuphazamiseka kwezithuthi okubangelwa zizithuthi, abahambi ngeenyawo kunye nemfuyo. Esona sicelo sixhaphakileyo sothungelwano olwahlula uhola wendlela. Ibonakaliswa ngexabiso eliphantsi kunye nokusebenza kweendleko eziphezulu.
Ucingo lwesakhelo: Ihlala isetyenziswa njengokukhusela okuvalelweyo kumacala omabini kaloliwe ukunqanda ukuphazamiseka kwetrafikhi okubangelwa kukungena ngokungacwangciswanga nokuphuma kwezithuthi, abahamba ngeenyawo kunye nemfuyo. Uphawu lomelele kwaye lomelele, aloyiki umoya kunye nemvula.
Iindidi eziqhelekileyo kunye neempawu zocingo lukaloliwe
Iminatha yocingo yesakhelo: Iminatha yocingo esetyenziswa ngokulula koololiwe yahlulwe yaziinethi zesakhelo esithe nkqo kunye neminatha yocingo egobileyo. Umnatha ocoliweyo wesakhelo esithe nkqo awunangqangi phezulu, kwaye akukho ukugoba okuku-30-degree, ngelixa umnatha wocingo olugobileyo unama-30-degree bend phezulu kwaye uphuma ngaphandle kwesakhelo. Ziye zibonakaliswe ngokuqina ngakumbi kunye nokuqina, ezibonakala ngenkangeleko yemingxunya emincinci, idayimitha yocingo ejiyileyo, kunye nobukhulu bodonga lwesakhelo.
Umnatha wocingo ongoonxantathu: Ngumnatha onamandla kakhulu ocingo ngoku ucofwa kumacandelo ahlukeneyo. Ibonakaliswa ngokusebenza kwexabiso eliphezulu, ukuphakama okukhulu, kunye nemigca engalinganiyo, intle kakhulu. Ikholamu inokuba yikholamu emile okwe peach okanye ikholamu ngokubanzi.
Iindidi eziqhelekileyo kunye neempawu zocingo lokuzalela
Umnatha waseDatshi: uhlobo olulula lomnatha wocingo, umnatha usisikwere, ubungakanani buyahlulwe: 5 * 5CM kunye no-6 * 6CM, i-weft i-wavy, ke ikwabizwa ngokuba ngumnatha ocingayo, umphezulu ugqunywe ngeplastiki, yahlulwe ngeplastiki eqinileyo kunye neplastikhi enegwebu Iindidi ezimbini, ubukhulu becala leplastiki ngokubanzi liyi-2-3 mm. Uphawu kukuba ufakelo, ukuthuthwa kunye nemveliso zilula kakhulu kwaye zilungele, kwaye ukusebenza kweendleko kuphezulu kakhulu.
Chain Link Kucingo olubiyele: A uhlobo umnatha ngentsimbi eyenziwe pre-ukugoba ukwaluka kunye nokungenelela umnatha enemingxuma ezimilise okwedayimane. Ibonakaliswa kukuchasana nefuthe elifanelekileyo kunye neendleko eziphantsi.
Umnatha wenkomo yenkomo: umnatha omkhulu, osetyenziselwa ukufuya iinkomo ezinkulu, amahashe, iigusha, njl.
Iindidi eziqhelekileyo kunye neempawu zocingo olubiyelweyo
Umnatha waseDatshi: Uhlala usetyenziselwa ukuvalela kwiindawo ezahlukeneyo. Ingasetyenziselwa ukufuya okanye ukutyala iintyatyambo kunye nemithi. Ukuphakama kwayo kuqhele ukusetyenziswa kwi-1M | 1.2M | 1.5M | 1.8M | 2.0M, kwaye ubude ziimitha ezingama-30 kuluhlu ngalunye. .
Ucingo lwentambo esecaleni kabini: Inokusetyenziswa njengendawo ebiyelweyo kwindawo ethe tyaba, enobukhulu obulinganiselweyo kunye nezithintelo ezithile ngexesha lofakelo. Ubungakanani obuqhelekileyo yi-3 * 1.8M. Jonga intshayelelo yocingo kuhola wendlela.
Ucingo olucocekileyo: ngumnatha wocingo oludala, kodwa olusebenzayo, notsalwayo uweliswe ziingcingo ezihlabayo ukwenza udonga oluhlabayo. Inqaku lilula kwaye licacile. Ikholamu inokuba yiyo nayiphi na into enokusebenziseka, enjengeemfumba zokhuni, imibhobho yesinyithi, imithi, amalungu ekhonkrithi, njalo njalo.
Iindidi eziqhelekileyo kunye neempawu zeminatha yocingo yokugcina indawo yokusebenzela
Zininzi iintlobo zocingo ezisetyenziselwa ukugcinwa kwendawo yokusebenzela yedwa, kubandakanya ukubiyela isakhelo, ukwanda kocingo lwesinyithi, ucingo lwekhonkco lokudibanisa, ucingo lwe-mesh, iingcingo ezi-triangular ezibiyelweyo, iingcingo zamacala amabini, njalo njalo. Xa ukuphakama kocingo kuphezulu, kuyafuneka usebenzise ucingo lwesakhelo, ucingo olwandisiweyo lwentsimbi, ucingo lwekhonkco lomxokelelwano, njl.njl.
Iindidi eziqhelekileyo kunye neempawu zeminatha yocingo lwezemidlalo
Ikhonkco lokudibanisa ikhonkco: ucingo lokudibanisa ikhonkco lusetyenziswa njengomzimba womnatha, kwaye imiphetho ixhaswa yimibhobho yentsimbi. Ibonakaliswa kukuqina kunye nokumelana nefuthe eliphezulu, kunye nokusebenza kweendleko eziphezulu.
Ukwandiswa kocingo oluthambileyo: Umnatha owandisiweyo usetyenziswa njengomzimba womnatha, kwaye imiphetho ixhaswa yimibhobho yentsimbi. Ibonakaliswa ngokuzinza kunye nokuchasana nefuthe elinamandla, kwaye ixabiso liphakathi.